Simba uye kushomeka mune yepamhepo kushambadzira zano | ECommerce nhau
Simba uye kushaya simba mune yepamhepo kushambadzira zano
Kuti ubudirire ne online kushambadzira zano zvakafanira kufunga kuti sei kusimba uye kushaya simba kwebhizinesi rako izvo zvinokanganisa chaizvo kushambadzira kwako.
Kune izvi zvakakosha kuti iwe uite a kuongorora kwakatendeseka uye kwakasimba, kutsvaga kusimba uye kushaya simba, pamwe nekutyisidzira nemikana.
1 Ndeapi masimba uye kushaya simba
1.1 Ndeapi masimba
1.2 Chii chinonzi kushaya simba
2 SWOT kudzidza: nei zvichikosha
3 Maitiro ekuita SWOT kudzidza mune yepamhepo kushambadzira zano
3.1 Ziva zvako zvemukati zvinhu
3.2 Ziva zvako zvekunze zvinhu
3.3 Gadzira yako yekutengesa padanho zano kusimudzira zvakanakira yako eCommerce
4 Ndeapi masimba uye kushomeka kwebhizimusi rako reEcommerce?
5 Online Yekushambadzira Strategic: Ko Zvakadii Mikana uye Kutyisidzira?
Ndeapi masimba uye kushaya simba
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kuziva chaizvo zvatiri kureva nezvazvo kusimba uye kushaya simba muCommerce. Uye aya mazwi ane hukama zvakanyanya neiyo SWOT Yekudzidza uye panguva imwe chete ivo vanokupa iwe wepasi rose chiratidzo chemamiriro ebhizinesi rako repamhepo. Muchokwadi, kuongororwa kwesimba uye kushomeka kwebhizinesi (kungave online kana panyama) kunogona kukubatsira kunatsiridza izvo zvinhu zvaunotadza "nekusimudzira izvo zvinokusiyanisa nemakwikwi ako.
Naizvozvo, kuziva chimwe nechimwe chazvo kuchakubatsira iwe kuona akasiyana maficha eCommerce yako.
Tinogona kutsanangura kusimba se kugona uko munhu anako, kana bhizinesi, kunoita kuti zvionekwe. Mune mamwe mazwi, ivo vanomiririra musiyano wakanaka kubva kune vamwe vanhu kana mabhizinesi. Mune ino kesi, isu tinogona kutaura kuti iwo ndiwo akanaka, anozivisa uye akasiyana maficha ebhizinesi.
Semuenzaniso, fungidzira kuti iwe unogadzira online online chitoro. Uye zvinoitika kwauri kuti iwe uise chikamu mune icho chifananidzo chinoratidzwa uye ivo vanogona kuwedzera matoyi avanoda. Uye zvakare, iwe unopa mukana wekushandisa 3D kuitira kuti iyo kamuri iratidzwe mumba uye inopindirana nematoyi. Ndiro simba rebhizinesi rako, nekuti urikugadzira chimwe chinhu chisina munhu, uye nekudaro chinhu chakakosha kuratidza muchirongwa chekushambadzira.
Chii chinonzi kushaya simba
Ngatitaurei nezve kushaya simba. Kusiyana nezvakamboitika, kusasimba ndiko hunhu hunodzivirira kana kutadzisa kukura kwakanaka kwebhizinesi rako zano. Mune mamwe mazwi, isu tiri kutaura nezve izvo zvinhu zviri kuzokukuvadza iwe uye izvo zvaunofanirwa kufunga nezvazvo kugadzirisa yako eCommerce.
Kukupa iwe muenzaniso, neiyo imwechete chitoro chitoro, hutera hunenge huri hukuru hwako. Chokwadi, kune vakwikwidzi vazhinji vanga vari muchikamu kwenguva yakareba, uye zvinoreva kuti vane vatengi vakavimbika kana yakawanda kana shoma yakatemwa yevatengi base. Kune rimwe divi, kwete iwe. Naizvozvo, isu tiri kutaura nezve kushaya simba, chimwe chinhu chaunofanirwa kugadzirisa uye panguva imwechete zvinokuvadza zvawakafananidza nemakwikwi ako.
SWOT kudzidza: nei zvichikosha
Kuongorora kusimba uye kushaya simba kweCommerce kunosanganisira kuita ongororo yemukati yebhizinesi rako. Mune mamwe mazwi, zvingave zvekugadzirira chikamu chekutanga cheSWOT kuongorora. Asi chii chinonzi SWOT kuongorora?
ari SWOT mazwi ekutaura anoreva kushaya simba, kutyisidzira, simba uye mikana. Iko kuongorora kunoitwa kunoenderana nezviri mukati (Kuneta uye Simba) uye zvekunze (Mikana uye Kutyisidzira).
Iri gwaro rakakosha kwazvo kuti ukwanise kuongorora mamiriro ezvinhu aripo eCommerce yako uye nekudaro kukwanisa kuita sarudzo dzakakodzera uye dzinoenderana nebhizinesi rako. Chii chine chekuita neinternet kushambadzira zano? Zvizhinji.
Kunyanya, mune yepamhepo kushambadzira zano, Izvo hazvisi chete zvinodikanwa kuti uzive izvo zvinhu zvinoita kuti iwe umire kunze kubva kune vanokwikwidza, asi iwe unofanirwa zvakare kuzviziva. Ndokusaka kutsvaga zvakanaka nezvakaipa zvebhizimusi rako kwakakosha, nekuti nenzira iyi unogona kusimudzira zano rakavakirwa pasimba rayo iwe uchishanda kushandura izvo kusasimba kuita simba (kana, zvirinani, kuzviita kuti zvinyangarika uye zvisave zvakashata zveCommerce yako).
Ini ndawana seivkuita chidzidzo cheSWOT pane zano rekushambadzira online
Iye zvino zvaunoziva kuti zvakakosha sei kuziva Simba uye Utera, pamwe neZvekutyisidzira nemikana, mubvunzo unotevera waunogona kuzvibvunza ndewe kuzviita. Ndokunge, unoita sei iwe kuongorora kweSWOT mune yepamhepo yekushambadzira zano reiyo eCommerce?
Iyo SWOT yekuongorora inowanzo kuve inomiririrwa mune 2 × 2 matrix, kana mune 2,2 tafura, nenzira yekuti kuongorora kwemukati nekunze kwakarongedzwa, uye iwo mana mazano ane hukama nenzira yekuti matrix ichave Saka:
Kushaya simba - Zvinotyisidzira
Simba - Mikana
Nenzira iyi, iyo Chikamu chekutanga chaizowirirana nekuongororwa kwemukati, nepo chechipiri chaisanganisira zviitiko zvekuongororwa kwekunze.
Uye zvinoitwa sei? Kutevera matanho aya:
Ziva zvako zvemukati zvinhu
Tinotaura nezveavo zvinhu zvinogona kuve zvese kusimba uye kushaya simba. Somuenzaniso:
Unyanzvi uye ruzivo.
Zviri nyore kuti iwe ugadzire yakazara rondedzero yezvose zvine hukama mukati. Ipapo, iwe unofanirwa kuzvipatsanura muzvikamu zviviri, kusimba uye kushaya simba. Nzira yekusiyanisa navo? Mune masimba iwe unofanirwa kuisa izvo zvinhu zvinounza mukana pane vako vakwikwidzi.
Semuyenzaniso: zvirinani rinozivikanwa mhando, network iri nani, zvigadzirwa zvinokwezva, mitengo iri nani ...
Kune rimwe divi, iwe unenge uine kushaya simba. Idzi ndidzo dzinozoita kuti usanyanya kukwikwidza, senge: kushomeka kwechiitiko, matambudziko emukati, zvivakwa zvekare, kusava nechinzvimbo muCommerce, kusava nemagariro ...
Ziva zvako zvekunze zvinhu
Sezvakangoita zvemukati zvinhu, zvinodawo kuita nezve zvekunze, asi nguva dzose zvichibva nenyaya yekuti makwikwi ari online, sezvo tiri kutaura nezve eCommerce.
Panyaya iyi, zvinhu zvakaita sevatengesi, vagoveri, zvinhu zvehupfumi, shanduko mumaitiro evatengi, vakwikwidzi vakuru… vanogona kuona mikana yako nekutyisidzira
Gadzira yako yekutengesa padanho zano kusimudzira zvakanakira yako eCommerce
Iye zvino zvawava kuziva zvese zvinhu zvinokanganisa kufambira mberi kweCommerce yako, inguva yekuvandudza nzira yekutengesa yepamhepo inotarisana nekubatsirwa neMasimba neMikana yako, panguva imwechete iyo iwe yaunoshandura iyo Weaknesses kuita chimwe chinhu chakanaka, uye mira Kutyisidzira
Semuenzaniso, fungidzira kuti kushaya simba hakusi kwekudyidzana. Sisitimu yekushambadzira pamhepo ingave yekugadzira aya maratidziro uye kuvapa chiratidzo "hunhu", ndiko kuti, kuvapa hupenyu uye kuchengetedza kusangana nevashandisi vanogona kufarira chigadzirwa chako kana bhizinesi.
Tevere, uye nenzira inoshanda, iwe unozogona kuziva kuti ndeapi masimba, kushaya simba, mikana uye kutyisidzira kwebhizimusi reCommerce. Nekudaro, iwe uchave unokwanisa kuona mhedzisiro iwe yaunogona kuwana kubva kune iyo SWOT kuongorora.
Ndeapi masimba uye kushomeka kwebhizimusi rako reEcommerce?
Kana zvasvika kune online kushambadzira zanoIyo izano rakanaka kuita tsvakiridzo yemusika pane ako aripo vatengi. Izvi zvinokubatsira iwe kuvaka yakatendeseka maonero ehunhu hwako sekambani mumusika.
Mimwe mienzaniso yesimba inogona kusanganisira:
Yega uye inoshanduka vatengi
Akawanda akakosha maficha kana mabhenefiti ayo ako zvigadzirwa anopa
Iva neruzivo rwemberi kana ruzivo
Nezve kushaya simba:
Kusina mari inodiwa
Kusava nemukurumbira wakanaka mumusika
Iva nehurongwa husina kukwana hwekuverenga
Online Yekushambadzira Strategic: Ko Zvakadii Mikana uye Kutyisidzira?
Mune izvi online kushambadzira zano reEcommerce mabhizinesi Izvo zvakakoshawo kusanganisira zvese mikana uye kutyisidzira. Mupfungwa iyi tine:
Wedzera kudiwa kwechimwe chikamu chemusika
Shandisa iyo Internet kusvika kumisika nyowani
Iko kushandiswa kwetekinoroji iyo inovandudza mhando yezvigadzirwa
Kubuda kwevakwikwidzi vatsva
Zvirinani, zvinotaridzika kana zvepamusoro, kunyangwe zvakachipa shanduro dzechigadzirwa chiri kupihwa
Mitemo mitsva inowedzera mari
Kudzikira muhupfumi iyo inoderedza kudiwa kwepasirese
Chero zvazvingaitika, kana iwe uchinge wapedza iyi ongororo, unogona kuyera zvingangoitika mhedzisiro yechinhu chimwe nechimwe kuumba yako online yekutengesa zano. Tichifunga nezve zvese izvi zvinhu, zvinowanzoita kugadzira online kushambadzira nzira inoenderana nezvinodiwa zvazvino uye nemikana yakakura yekubudirira.
Nei zano rekushambadzira kwedhijitari rakakosha kudaro?
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » Kutengeswa kweIndaneti » Simba uye kushaya simba mune yepamhepo kushambadzira zano
Zvinoita here kuti ugadzire ecommerce mumaawa makumi maviri nemana? Matanho anodiwa kuti uzviite
Ndezvipi zvinotungamira mukushambadzira uye kuti ungazvigadzira sei